पाठेघरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन बेलैमा कसरी थाहा पाउने ? – Bihani Post
Home / स्वास्थ्य खबर / पाठेघरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन बेलैमा कसरी थाहा पाउने ?
Bihani Post February 7, 2019	स्वास्थ्य खबर Leaveacomment 504 Views
एजेन्सी । १५ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार पाँच सय महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखापर्छ जसमध्ये करिब एक हजार चार सयको मृत्यु हुने गर्दछ ।
क्यान्सर हुनुपूर्व नै पत्ता लगाउन सकिने भए पनि जनचेतनाको कमीका कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सर पीडित महिलाको संख्या बढ्दो छ । भाइरसको संक्रमणलाई प्रि क्यान्सर भनिन्छ । यो भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ। समयमै संक्रमण पत्ता लगाउन नसके ८-१० वर्षपछि यो क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । संक्रमण भए नभएको प्याप स्मेयर टेस्ट गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्याप स्मेयर टेस्टलाई पाठेघरको मुखको पानीको जाँच अर्थात् गर्भाशय स्राव परीक्षण भनिन्छ ।
यो एउटा सजिलो जाँच विधि हो । यो जाँच गराउँदा महिलालाई धेरै झन्झट र दुःख हुँदैन । प्याप स्मेयर टेस्ट गर्दा स्त्रीरोग विशेषज्ञले पाठेघरको मुखबाट कोष निकालेर एउटा सिसामा फैलाएर प्याथोलोजिस्ट कहाँ पठाउँछन्। प्याथोलोजिस्टले माइक्रोस्कोपमा ती कोषहरुलाई हेरेपछि त्यसमा संक्रमण रहेको वा क्यान्सर नै रहेको भन्ने पत्ता लाग्छ । २१ देखि ६५ वर्ष उमेरका महिलाले यसको परीक्षण गराउनुपर्छ। यो परीक्षण पहिला ६ महिनाको फरकमा तीनपटक गर्नुपर्छ ।
Previous बैंकमा यति करोड जम्मा भएपछि कृष्ण-रुपाले भने -अब हामीलाई सहयोग रकम पुग्यो(भिडियो सहित)
Next मेघाको कालो कर्तुत पर्दाफास: बिराटनगरबाट श्रीमान बिकासको खुलासा, वास्तविकता यस्तो (भिडियो सहित)